SOCXO: Marketing amin'ny Advocacy miaraka amin'ny vidiny mifototra amin'ny fampisehoana | Martech Zone
SOCXO: Marketing amin'ny Advocacy miaraka amin'ny vidiny mifototra amin'ny fampisehoana
Talata, Febroary 20, 2018 Alatsinainy 19 Febroary 2018 Mukund Krishna
Ao anatin'ny tontolon'ny Marketing Marketing, ny Marketing Digital dia hatreto no fomba fanao ankafizin'ny Brands hanatratra sy hampiasana ny mpihaino azy an-tserasera. Ny maodely Marketing Digital mahazatra dia misy ny fampifangaroana ny mailaka, ny fikarohana ary ny haino aman-jery sosialy ary efa hatreto no nampiasa fomba fanao sy karama mba hamoronana sy hizarana atiny marika amin'ny Internet.
Na izany aza, nisy ny fanamby sy ny adihevitra momba ny paikady, ny fandrefesana, ny vokatra ary ny ROI amin'ny fomba fampitam-baovao karama amin'ny marketing nomerika. Raha ny Email sy ny Search dia mety manome lanja mahazatra amin'ny fandrefesana marketing, ny Social Media Marketing dia miatrika fiovana algorithmika tsy miova ary ambany ny sanda azo tsapain-tanana ny firotsahana amin'ny mpampiasa amin'ny fantsona media sosialy.
Ny grail masina ny fahazoana voajanahary ny atiny karama na doka amin'ny media sosialy dia fanamby tsy tapaka.
Tena miharihary fa, ny atiny ateraky ny mpampiasa dia omena lanja kokoa noho ny lahatsoratra / doka marika ary ny Atiny avy amin'ny namana, fianakaviana sy ny mpiara-miasa aminao dia misy ifandraisany bebe kokoa sy fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny fantsona media sosialy.
Humanizing Marketing Media amin'ny alàlan'ny Advocates amin'ny marika matoky
Advocacy Marketing, hevitra iray mivoatra na marketing amin'ny atiny, dia mikendry ny hamaha ny sasany amin'ireo fanamby voalaza etsy ambony ho an'ny Brands. Advocacy Marketing dia fantsom-barotra sosialy feno ho an'ny Brands amin'ny alàlan'ny mpiray antoka aminy.
Marketing Advocacy amin'ny alàlan'ny sehatra toa SOCXO Manome fomba hafa amin'ny marketing amin'ny alàlan'ny famoronana lamba media sosialy ho an'ireo orinasa izay mandray ny fomba fiasa ary maka tahaka ny fihetsiky ny haino aman-jery sosialy ao anatin'ny orinasa.
Advocacy Marketing, amin'ny teny tsotra, dia ahafahan'ny marika mamorona:
Manararaotra mpandray anjara (mpiasa, alumni, mpiara-miasa, mpanjifa ary mpankafy) marika iray
Arovy ary atolory ny atiny misy ifandraisany sy manavaka azy ireo
Mamorona fitokisana, mangarahara ary ampandraiso am-pahamendrehana izy ireo ho mpanolotsaina marika
Tsinjarao sy hamafiso ao anaty tambajotra sosialy sy tambajotram-pifandraisan'izy ireo izany atiny Brand Relevant izany
Hatsarao ny fahazoana voajanahary sy ny fidiran'ny atiny ao amin'ny media sosialy
Ampitomboy ny sandan'ny marika tsy azo tsapain-tanana sy ny sanda ara-barotra azo tsapain-tanana ho an'ny Brands
Tombony azo amin'ny Marketing Advocacy
Mampifandray ny mpandray anjara rehetra (mpiasa, alumni, mpiara-miasa, mpanjifa ary mpankafy) an'ny orinasa amin'ny tranonkala tokana sy midadasika sy sehatra finday hifandraisana sy hifandraisana amin'ny marika na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra
Mamorona fantsom-pifandraisana azo antoka sy mangarahara ho an'ny orinasa / marika miaraka amin'ny mpiasa anatiny sy ivelany
Manome hery ny mpiasa sy ny mpiara-miombon'antoka hahazo fahalalana amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny orinasa, fironana indostrialy / tsena, fampahalalana mpifaninana, fanavaozana ny vokatra sy serivisy
Manome fidirana amin'ny atiny Marika amin'ny resaka fampielezan-kevitra amin'ny marketing, fampielezan-kevitra amin'ny asa, fampielezana vokatra, bilaogy, atiny fianarana ary fampahalalana momba ny tsena ivelany
Mampiasà ireo mpiasany haneho ny heviny sy ny heviny ho toy ny fitarihana fisainana sy ny atiny fahalalana
Mamporisika ny mpiasa, ny mpiara-miombon'antoka, ny mpanjifa ary ny mpankafy ho toy ny Brand Advocates hanamafisana ny atiny amin'ny alàlan'ny tambajotran-tserasera sy serasera ary ho lasa micro-influencer amin'ny Brand
Manamora ny marika manokana an'ny mpiasany amin'ny tambajotra sosialy - ny marika ataon'ny mpiasa
Manampy ny varotra ara-tsosialy, ny fanofana ara-tsosialy ary ny fanamafisana ny marika amin'ny alàlan'ny Advocates
Mihaino ny filazan'ny mpiasa, mpiara-miasa amin'ny atiny, hevitra
Mahafantatra, manetsiketsika ary manome valisoa ireo mpisolovava amin'ny fanohanany ny marika
Manatsara ny fandraisan'anjaran'ny mpiasa, ny fihazonana azy ary ny fahafaham-po
Manatsara ny kolontsaina sy ny firosoana amin'ny ekipa misy tsipika fandraharahana
Ahoana no anaovan'ny SOCXO izany?
SOCXO dia iray amin'ireo mpiditra voalohany ary mpifaninana matanjaka amin'ny sehatry ny varotra votoaty sy fiarovana. Ny ankamaroan'ny sehatra ankehitriny eo amin'ny sehatry ny Marketing Advocacy dia tsy niresaka afa-tsy ny filan'ny mpivarotra raha ny amin'ny fizarana atiny na ny filan'ny fifandraisana eo amin'ny toeram-piasana.
Na izany aza, ny SOCXO dia nampiavaka ny tenany tamin'ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpivarotra amin'ny orinasa iray, nahafahan'izy ireo sy ireo ekipa tsipika fandraharahana toa ny PR, HR, Sales, Product ary ny Leadership hiara-miasa amin'ny mpiray antoka aminy hatrany amin'ny alàlan'ny fangatahana fidirana an-tsehatra maro sy fandraisana andraikitra hitazonana ny mpiasa hifandray amin'ny marika sy ny orinasa.
SOCXO dia mikendry ny hanome tolotra tsotra sy miavaka miaraka amin'ny rafitra mpanjifa matanjaka amin'ny fidirana an-tserasera sy fahombiazana amin'ny fampiharana marketing marketing sy fifamatorana amin'ny marika tsirairay.
Ankoatry ny fanampiana ireo orinasa hampitombo ny votoatin'ny marika ao amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny alàlan'ny mpisolo vava azy ireo, ny SOCXO dia manampy ny orinasa hampitombo ny mpiasan'izy ireo ary hamorona marika manokana amin'ny haino aman-jery sosialy koa.
SOCXO dia mpitarika amin'ny fampiroboroboana ny foto-kevitry ny varotra fanentanana any India ary niditra vao haingana tany Etazonia izay manana mpanjifa mihoatra ny 25 ho mpanjifa ao anatin'ny herintaona nanombohana ny tolotra nataony tamin'ny taona 2017.
SOCXOs vokatra sy fanavakavahana vokatra
Famoronana atiny sy famoronana atiny - Mba hialana amin'ny fanamby tsy miova amin'ny famoronana sy ny famaritana ny atiny vaovao, SOCXO dia manolotra ny fahafaha-misimisy sy mamoaka atiny marika avy amin'ny bilaogy, pejy media sosialy, ary feed hafa, manivana an'io atiny io, ary manampy tolo-kevitra momba ny atiny.
Fanamorana ny atiny sy famoahana - Amin'ny alàlan'ny antonony maodely manan-tsaina, Brands dia afaka miantoka fa manaraka ny politikam-pifandraisana izy ary manolotra atiny mifandraika / misy fahalalana ho an'ny mpiasa, mpiara-miasa ary mpanjifa. Ny Administrators ao anaty votoatiny dia afaka mametraka sivana hamoahana ho azy ny mpampiasa azy amin'ny alàlan'ny kalandrie atiny sy hametrahana ny faran'ny atiny hanalana azy ireo amin'ny talantalana. Ireo mpisolo vava dia afaka mametraka fandaharam-potoana hizarana atiny ao amin'ny pejin'ny haino aman-jery sosialy tsirairay avy.
Fanamafisana sy valisoa - Ny gamification namboarina dia manondro teboka ho an'ny hetsiky ny mpampiasa eo amin'ny sehatra amin'ny famoronana, famoahana ary fizarana atiny, fidirana amin'ny fampiharana anatiny. Ny takelaka mpitarika sy ny Badges dia ahafahan'ny mpivarotra manome sy mankasitraka ireo mpisolovava izay mavitrika ary mandray anjara amin'ny fanentanana sy fifamatorana marika. Ny famoronana valisoa sy ny fanavotana dia ahafahan'ny mpitantana manentana ny fifandraisan'ny mpiasa amin'ny atiny marika.
Analytics sy ny firotsahana - Fampahalalana miavaka momba ny analytics avy amin'ny fantsona media sosialy rehetra momba ny atiny sy ny fampidiran-dresaky ny mpampiasa, ao anatin'izany ny famokarana, ny pejy, ny fotoam-pivoriana ary ny fandrefesana. Fampidirina miaraka amin'ny Google Analytics ary koa ny tatitra lehibe momba ny atiny fironana, ny atiny zaraina ary ny tag mpampiasa indrindra.
Fampiharana finday misy marika - SOCXO dia manolotra fampiharana finday misy marika tokana sy tokana ho an'ny marika tsirairay mba hananany tena manokana ny fahatsapana ilay app ho an'ireo Advocates (Users)
Na dia mifantoka amin'ny fizarana atiny fotsiny aza ireo mpilalao sehatra hafa ho lahasa lehibe amin'ny vokatra vokariny dia mino mafy ny SOCXO fa ny mpiasa miasa no mpiaro tsara indrindra. Manoloana izany, ny SOCXO dia mamorona fifangaroan-kevitra fanampiny miampy endri-javatra miampy lanja mba hanomezana fahafaham-po ny tanjon'ny marketing Advocacy.
Ankoatry ny lafiny ifotony amin'ny fizarana sy fandrefesana ny atin'ny marika, ny SOCXO dia manolotra asa fifamatoran'ny mpiasa matanjaka, ny endri-javatra manintona ary ny fomba fijery kognitive data-data mba hitazomana ireo mpisolovava marika mifamatotra amin'ny marika sy ny platform amin'ny alàlan'ny Micro-Service Applications:
Ny fahitana atiny tsy manam-paharoa SOCXO amin'ny fampiasana teny lakolosy semantika dia manampy amin'ny fakana sy ny sivana votoaty mifandraika amin'ny marika amin'ny Internet amin'ny fotoana tena izy - amin'izay hampihena ny ezaka hikarohana atiny vaovao isan'andro
Ny valim-panadihadiana momba ny fanadihadiana sy ny fampiharana micro dia manome fandraisana anjara amin'ny fotoana tena izy ary fanehoan-kevitra mitohy avy amin'ireo mpisolovava
Fandrefesana traikefa ananan'ny mpiasa hahazoana ny heviny momba ny firotsahan'ny mpiasa sy ny fahafaham-pony
Fampidirana miaraka amin'ny rafitra fitantanana ny atiny fitantanana sy CRM
Plug-in Lead Generation sy Call-To-Action namboarina tamin'ny fanamafisana ny atin'ny marika / atiny mifandraika amin'ny tranokala ivelany
Fanarahana sy fandrefesana ny fampielezan-kevitra rehetra momba ny taranaka mitarika
Cognitive Analytics momba ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa sy ny atiny hampifanaraka ny atiny
Vidiny mifototra amin'ny SOCXO
Ny SOCXO no hany sehatra fampiroboroboana ny varotra izay manome maodely momba ny vidiny mifototra amin'ny fampisehoana fa tsy ny vidiny miorina amin'ny mpampiasa izay heverina ho vola tsy voatanisa amin'ny mpivarotra. Ny maodelin'ny SOCXO miavaka isaky ny karama dia mifanaraka tsara amin'ny hetsika andrasana sy ny valin'ny fitondran-tenan'ny Mpampiasa eo amin'ny lampihazo, izany hoe hizara ny atin'ny marika amin'ny tambajotran-tsosialy.
Ireo mpivarotra dia efa nandray ny refy momba ny varotra atiny ho an'ny varotra atiny momba ny vidin'ny vidiny isan-tsonga, ny vidiny isan-tsindry ary ny vidiny isaky ny mitarika sns. ivelan'ny SOCXO mankany amin'ny tanjon'izy ireo amin'ny varotra mpisolo vava.
Ny Advocacy ho toy ny foto-kevitra sy ny trangam-barotra dia vonona hanana fahitana lehibe sy hery misintona eo amin'ny Brands sy Agencies amin'ny taona 2018. Ny Advocacy Marketing dia nahita ny habaka tao amin'ny habaka Marketing Content nilahatra tamin'ny mailaka, karoka ary haino aman-jery sosialy ary hanana anjara toerana lehibe amin'ny fantsona hafa handraisana anjara, hampiroborobo ary hanamafisana ny atiny amin'ny alàlan'ny fomba organika, atokisana ary tena izy.
Ny SOCXO, miaraka amin'ny sehatra SaaS sy finday misy karazany hafa, dia mazoto manohana ireo marika izay mazoto mampiasa azy io.
Makà fitsapana SOCXO maimaim-poana
Tags: varotra fanentananafanentanana amin'ny marikaContent Marketingfanentanana ho an'ny mpanjifafiarovana ny mpiasaFifandraisan'ny mpiasagamificationAdvocacy PartnerFanofana ara-tsosialyfivarotana ara-tsosialysocxo
Takatr'i Mukund fa ny Advocacy Marketing, teny sy fotokevitra vaovao, dia niako tao amin'ny sehatry ny varotra izay taratry ny hevitra fananganana mpisolo vava marika hanomezana fatra voajanahary ny atin'ny marika amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy. Miaraka amin'izany eritreritra izany no nanorenany Mukund SOCXO ary nanetsika ny hevitra amin'ny famoronana sehatra tranonkala tsotra nefa matanjaka sy vokatra finday misy marika ho an'ireo orinasa hampifandray sy hampiasana ny tafiky ny mpiasa, ny mpiara-miombon'antoka ary ny mpanjifa ho mpisolo vava marika sy micro-influencers amin'ny media sosialy.
Ny Click-to-Call dia nanjary manakiana ny fahombiazan'ny dokam-barotra amin'ny fikarohana eo an-toerana